गाईलाई भीआर चस्मा लगाइदिँदा खुसी भएर दियो धेरै दूध ! -
गाईलाई भीआर चस्मा लगाइदिँदा खुसी भएर दियो धेरै दूध !
प्रकाशित मिति : २०७८, २९ पुष बिहीबार
रमणीय दृश्यले गाईलाई आरामदायी र खुसी बनाउँदा दूध पनि बढी दिने यसअघि एक अध्ययनले देखाएको थियो जसकै आधारमा उनले पनि आफ्ना वस्तुमा यो परीक्षण गरेका हुन् उनका अनुसार यो उपाय लगाउँदा गाईले दिने दूधको मात्रा प्रति दिन २२ लिटरबाट बढेर २७ लिटरसम्म पुगेको छ ।
किसान इजेटका अनुसार उजाड मौसमका बेलामा हरियो चौर देख्नुले गाईलाई वास्तवमै भावनात्मक प्रभाव पार्ने रहेछ । उनी भन्छन्, “यसले उनीहरुमा स्ट्रेस पनि कम गरायो । ” यसरी भीआर चस्मा लगाएको गाईले खुसी हुँदै सुख्खा पराल खाइरहेको तस्बिर यतिबेला सामाजिक संजालमा चर्चामा आइरहेको छ ।
रुसको कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयका अनुसार रिसर्चमा भीआरले गाईमा स्ट्रेस र एन्जाइटी कम गराइ समग्र मुड राम्रो बनाइदिनाले सकारात्मक नतिजा देखिएको थियो । यसमा भीआर निर्माताहरुले गाइको टाउको फिट हुनेगरि विशेष तरिकाको सेट निर्माण गरेका थिए ।
त्यस्तै प्राविधिक विद्हरुले गाईले हेर्ने दृश्यसँग अनुकुल रङ मिलावटमा पनि ध्यान दिएका हुन् । गाईले प्राय पहेँलो, हरियो, नीलो र बैगुनी रङ मात्र राम्ररी देख्न सक्छ । त्यस्तै अर्को स्कटिस रिसर्चमा चाहिँ गाईवस्तुहरुमा वातावरणीय अवस्थाको उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने गरेको पत्ता लागेको थियो ।
यस्तोमा इजेटले आगामी दिनहरुमा आफ्ना गाईवस्तुका लागि अझ धेरै भीआर हेडसेट खरिद गर्ने योजना रहेको बताएका छन् ।
गोदाममा सुत्ने गरिब सेल्स गर्ल बनिन् अर्बपति सुपरस्टारकी गर्लफ्रेण्ड !
उत्तर कोरियाले फेरि २ मिसाइल हान्यो
चीनमा हुने विन्टर ओलम्पिकमा नेपाल सहभागी नहुने
५५ वर्षीया आयशा बनिन् सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला न्यायाधीश